Barium Hydroxide zvigadzirwa zvinonyanya kuve neBarium Hydroxide octahydrate uye Barium Hydroxide monohydrat.
Parizvino, huwandu hwehuwandu hweBarium Hydroxide octahydrate inopfuura 30,000 MT, uye huwandu hwehuwandu hweBarium Hydroxide monohydrate ndeye 5,000 MT, iyo inonyanya kugadzirwa negranular crystalline zvigadzirwa. Uye zvakare, pane shoma poda Barium Hydroxide monohydrate. Iko kugona kwekugadzira kweBarium Hydroxide monohydrate inotarisirwa kusvika 10,000 MT, uye nekudaro, iro gadzira simba reBarium Hydroxide octahydrate ichawedzerwa zvinoenderana. MuChina, Barium Hydroxide octahydrate inonyanya kutengeswa mudzimba nepo Barium Hydroxide monohydrate inotumirwa kunze kwenyika. Barium Hydroxide octahydrate uye monohydrate zvigadzirwa zviviri zveBarumumunyu ine kukurumidza kukurumidza mumakore apfuura.
Barium hydroxide octahydrate inonyanya kushandiswa mu barium girisi, mushonga, mapurasitiki, rayon, girazi uye enamel indasitiri mbishi zvigadzirwa, petroleum indasitiri seyakawanda-inoshanda yekuwedzera, oiri yakanatswa, sucrose kana seyanyorovera mvura. mbishi zvinhu zveBarium Hydroxide monohydrate.
Barium Hydroxide monohydrate inonyanya kushandiswa sechiwedzero chemukati injini yemagetsi yekuzora mafuta, plasticizer uye komputa inosimudzira muindasitiri yepurasitiki. Barium Hydroxide monohydrate ine yakaderera simbi yezvinyorwa (10 × 10-6 pazasi) inogona zvakare kushandiswa kune yakajeka girazi uye photosensitive zvinhu.
Barium hydroxide inowanzoshandiswa senzira yekugadzirisa iyo Synthesis yePhenolic Resin. Iyo polycondensation reaction iri nyore kudzora, iyo yakagadzirirwa resin viscosity yakaderera, iyo yekumhanyisa kumhanyisa iri kukurumidza, iyo inowedzera iri nyore kubvisa. Iyo yekuyerwa muyero ndeye 1% ~ 1.5% ye phenol.Iyo inoshandiswawo senzira yekugadzirisa mvura-inogadziriswa urea yakagadziridzwa phenol - formaldehyde adhesive. Chigadzirwa chakarapwa chakachenuruka yero. Iyo yakasara Barium Munyu mune resini haina kukanganisa dielectric chivakwa uye kugadzikana kwemakemikari.
Barium Hydroxide inoshandiswa seye analytical reagent, inoshandiswawo mukuparadzanisa uye kunaya kwesulphate uye kugadzirwa kweBarumunyu, kugadziriswa kwekabhoni dhayokisaidhi mumhepo. Quantification yeklorophyll. Kuchenesa kweshuga uye mhuka nemafuta emiriwo. Bhaira mvura inonatsa, Pesticides uye indasitiri yerabha.
Hydrosulfite De Sodium, Natrium Hydrosulfite, Karusiyamu Bromide Anhydrous, Hydrosulfite, Karusiyamu Bromide Liquid, Karusiyamu Bromide Solution,